UNidi del Faggio Rosso-kwiKhaya leHolide yoSapho
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAnna Maria
INidi del Faggio Rosso - LOFT ROSSO - yindawo ephezulu efudumeleyo nepholileyo.
Isitiya esibiyelweyo esibiyelwe ngokupheleleyo siyakuqinisekisa ukuba uyaphumla kunye nokuba bucala.Kukho ibarbecue, i-whirlpool yangaphandle kwaye kungekudala indawo entsha yokuqubha yabucala. Yonke imihla, ekufuneni kwakho, siya kukucebisa ngento omawuyenze, into oyibonayo, indawo yokutya, siphakathi kwezixeko ezininzi ezintle ezinomdla zehlabathi, Florence, Siena, Lucca, Bologna.Ukuba ungumthandi wezemidlalo, unokwenza, ukuhambahamba, iKayak, iNordic Walking bike bike.
Ungangena, ukusuka kumnyango wabucala, ngqo ngaphakathi kwisakhiwo ngokupaka imoto yakho ngokuzola okupheleleyo.
Isitiya esibiyelweyo esibiyelwe ngokupheleleyo siyakuqinisekisa ukuba uyaphumla kunye nokuba bucala. Kukho ibarbecue, itafile yeping-pong, i-whirlpool yangaphandle kwaye kungekudala idama lokuqubha labucala.
Unokuphumla emthunzini we-Beech ebomvu, mhlawumbi ufunda incwadi enhle, kwi-hammock kwaye ujabulele i-landscape.
Sikwindawo ezolileyo, ngaphandle kweflethi indlela yomhlaba evaliweyo kwitrafikhi iya kukuvumela ukuba uthathe uhambo kunye nokuhamba ngebhayisekile entabeni ngokuzola okupheleleyo. Sicebisa ukuba undwendwele ezinye izindlu zethu zokuhlala ezimbini nididelfaggiorosso-bianco kunye nididelfaggiorosso-verde
Umbuki zindwendwe ngu- Anna Maria
sijonge ukunxibelelana neendwendwe zethu
UAnna Maria yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maresca